By vijayafm on	 January 22, 2019 खेलकुद, देश, विविध खबर, सम्पादकीय
०७४ साल मंसिरमा थाइल्यान्डमा भएको आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको एसिया क्षेत्र छनोट खेलेपछि नेपाली महिला क्रिकेट टिम गुमनाम भयो । झन्डै १५ महिने यो अवधिमा नेपाली क्रिकेट टिम बेवारिसे बन्दा धेरै खेलाडी निराश बने, कतिले खेल्नै छाडे ।
लामो समयसम्म बेखबरजस्तै बनेको नेपाली महिला क्रिकेट टिमले बल्लतल्ल उठ्दै थाइल्यान्डमै आफ्नो खेल देखायो । नेपाली टिम थाइल्यान्ड महिला टी–२० क्रिकेट स्मास प्रतियोगितामा भाग लियो र दोस्रो भयो । आयोजक थाइल्यान्डसँग पराजित हुँदै उपविजेता भए पनि लामो समयदेखि खेलविहीन बनेका नेपाली महिला क्रिकेट टिमले यस्तो स्तरको प्रदर्शन गर्नु ठूलो कुरा नै हो ।
नेपाली महिला क्रिकेट टिम धुमिलो तयारी लिएर थाइल्यान्डमा सफा नतिजा खोजिरहेका थिए । नेपाल फाइनलसम्म राम्रो मात्रै हैन निकै राम्रो नतिजा निकाल्दै उपाधि नजिक पुगेको थियो । समूह चरणमा र सेमिफाइनलमा उत्कृष्ट जित निकालेको टोली फाइनलमा भने नराम्ररी पराजित भयो ।
यसपटक नेपाल इतिहास रच्नबाट एक कदमले मात्रै चुकेको हो । फाइनलमा नेपालको भेट बलियो प्रतिद्वन्द्वी आयोजक थाइल्यान्डसँग भयो । एसोसिएट राष्ट्रमा महिला क्रिकेट टिममध्ये थाइल्यान्ड नम्बर एक टिममै गनिन्छ । त्यसकारण पनि नेपाललाई त्यो उपाधि जित्नु सगरमाथाको चुचुरोमा टेक्नुभन्दा कम थिएन । नभन्दै नेपाल ७० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएसँगै उपविजेता बन्यो ।
यतिबेला नेपाली महिला क्रिकेट टिमलाई विभिन्न तरिकाले हेर्ने गरिए पनि अभावका बीच फाइनलमा पुग्नु सामान्य उपलब्धि होइन । त्यहीँ थोरै विचार गरेर यिनीहरु पनि केही हुन् भन्ने सोचिदिएको भए उपाधि जित्ने बलियो सम्भावना पनि देखिएको छ । करिब डेढ वर्षदेखि कुनै प्रतियोगिता खेल्न नपाएको नेपाली टिमबाट के अपेक्षा होला ? कस्तो नतिजा ल्याउला ? यो पक्ष निकै दुःखदायी छ । नियमित क्रिकेट नै खेल्न नपाउनु नै महिला टिमको कमजोर पक्ष बन्यो । पर्याप्त समय नहुनु र क्रिकेट हाँक्नेले बेवास्ता गरिदिनु । अब यतातिर पनि सोच्ने हो कि ∕